Winwing waa qaab Archero-qaab ah 'em la sawiro wanaagsan | Androidsis
WinWing waa dilaa qaab-dhismeedka Archero kaasoo nuskiis sii jiraya
WinWing waa Martiqaad leh dhameystir wanaagsan taas oo ay tahay inaan ku xuubsiibno markabkeenna markaynu dhex marno hirarka cadowga. Waxa kaliya ayaa ah in makaanikada noocan oo kale ah awgeed aan lumineyno kala-sooc la'aantaas iyo xoojinta la-dagaallanka hirarka joogtada ah.
Waa muhiim in la abuuro wax cusub ama la siiyo taabasho asal ah makaanikada sida kuwa Martianka ah, laakiin tani waxay noqon kartaa mid aan faa'iido lahayn. Nuxurka ugu weyn ee dilaaga Martian waa in lagu weeraro mowjado maraakiibta cadowga midba midka kale ayuu u soo socdaa. Midkan aan gacanta ku hayno, hirarkaas ayaa hoos loo dhigayaa iyadoo la dooranayo hagaajinta markabka. U tag.
1 Kordhi markabkaaga midba midka kale ka dib
2 In ka badan 100 gogo 'oo maraakiib u gaar ah WinWing
3 Aad bay uga sii badnaan kartaa
Kordhi markabkaaga midba midka kale ka dib
WinWing waa a cusub toogasho 'em up in uu leeyahay oo dhan muuqaalada si fiican u shaqeeyay iyo waxa farsamada ah ee nalagu helayo arcade oo doonaya inuu siiyo wareejin isla arinta Shuhadada. Sida Archero, Markasta oo aan marayno wajiga waxaan kala dooran karnaa seddex kobciyayaal kala duwan.
El Dhibaatadu waxay tahay in mid kasta oo ka mid ah hirarkaas ay xadidan yihiin tiro yar oo maraakiib ah oo ay tahay in la tirtiro si loogu gudbo xulashada awood-kordhin kale. Marka waxaan dhex mari doonnaa mowjadahaas annaga oo aan dareemin dareen ah in aan ka horreyno ciyaarta taas oo xoojinta ay ka mid tahay qodobbada muhiimka ah.
Nos waxaa noo hartay kala badh si aan u doorano labadiiba seddex haddii rasaastu tahay koronto, haddii aan kor u qaadno kuwa naqdiya ama haddii aan dib u buuxinno nolosha markabka. In kasta oo xulashooyinkaan Archero ay leeyihiin sababtooda, in la ciyaaro wareegii aan ku ciyaarnay daqiiqado yar, halkan waxay umuuqataa in ay na barayaan saxanka ugu weyn si aan indhahayaga uga qaadno kan labaad.
In ka badan 100 gogo 'oo maraakiib u gaar ah WinWing
Mid ka mid ah yoolalka dhabta ah ee markabkeenu waa inuu u rogo markab dagaal kaas oo aan ku wajihi karno maraakiib fara badan, laakiin ilaa aan ka gaadhno halkaas waa inaan isku hubnaa samirka lagama maarmaanka ah heerarka la sheegay.
Waana run taas haddii aan ka gudubno heerarkaas koowaad arrimuhu way is badalayaan, laakiin wax walba aad ayey gaabis u yihiin marka hore. Maraakiibta cadowgu si dhib yar ayey u dhaqaaqaan, waxayna umuuqdaan inay yihiin bartilmaameed tababar marka loo eego maraakiibta waxyaalaha nagu adkeeya.
Waan fahmi karnaa taas waxaa sabab u ah nidaamka lacag-abuurka hadda jira taas oo freemium ay adkaato oo ay adkaato in la siiyo waxa ugu fiican ciyaarta daqiiqadaha ugu horreeya. Taasi waa, wax walba waxaa lagu siiyaa raashin si aad ugu qaadato inta ugu badan ee suurtogalka ah ciyaarta la bilaabay oo markaa waxaad arki kartaa xayeysiis, iibso xawaareyaasha ...
Aad bay uga sii badnaan kartaa
WinWing waxay na siisaa khibrad marka hore wuxuu leeyahay dareen ah inaan noqon doonno kahor a Weeraryahannada 1945 tooganayayaal, laakiin inaad halkaa gaartid waxay qaadataa waqti. Oo maadaama aadan u sabrin, waxaad aadi doontaa mid kale. Way adag tahay in la isku dheellitiro waxyaabaha la bixinayo.
Muuqaal ahaan waa ciyaar soo jiidasho badan waxayna sifiican indhaha uga soo gashaa. Midabadaas muuqda, waxyaabaha muhiimka ah, jawiyada, iyo xitaa naqshadeynta maraakiibta waa mid aad u casri ah dhammaantood. Sida qabsashada lagu arko heerarka horumarsan, bandhig dhan oo iftiin leh ayaa la soo saaray oo qof walboo jecel inuu ku arko moobilkiisa. Way ka maqan tahay qodobka ah in wax yar la siiyo bilowga si ay u qabato, maxaa yeelay waxay u muuqataa "jilicsan" laga bilaabo daqiiqadda ugu horreysa.
WinWing waa ciyaar waxbadan bixin karta laakiin taasi way ku yartahay isku dayga inuu noqdo freemium leh ikhtiyaarro lacag-soo-saar wanaagsan. Bilaash ayaad ku haysataa Play Store, markaa waxaad horeyba u tijaabineysaa inaad hubiso inaad leedahay samirka loo baahan yahay.
Saldhig ciyaar weyn, laakiin horumarkaas ayaa gaabis ah illaa aad kahelayso xoogga.
Muuqaal ahaan qabasho
Noocyada kala duwan ee hagaajinta markabka
Si gaabis ah u soo bandhig ciyaarta ugu dambeysa
Isbedelada aad u tiro badan ee heerarka koowaad
WinWing: Dayax Gacmeed
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » WinWing waa dilaa qaab-dhismeedka Archero kaasoo nuskiis sii jiraya
Samsung Galaxy M31s waa rasmi: 6,5 "AMOLED iyo batari weyn oo 6.000 mAh ah